Kitra espaniola :: Voahosotra ho tompondakan’ny Liga ny Real Madrid - ewa.mg
Kitra espaniola :: Voahosotra ho tompondakan’ny Liga ny Real Madrid
Foot - News - Sport - Kitra espaniola :: Voahosotra ho tompondakan’ny Liga ny Real Madrid
Nibata ny amboaran’ny anarana tompondaka fahefatra amby telopolo tany Espana, na ny Liga amin’ny taranja baolina kitra ny ekipan’ny Real Madrid. Fandresena tamin’ny isa 2 noho 1 nanoloana ny Villareal, afak’ omaly alina, niaraka tamin’ny faharesen’ny Barcelone tao antaniny 1 noho 2 teo anoloanan’ ny Ossasuna, no niverenan’ny amboara teo am-pelantanan’ny klioba tarihin’ilay mpanazatra frantsay, Zinedine Zidane. Isa 86, taorian’ireo andro 37 tontosa, no nahavoahosotra ny Real de Mardrid ho tompondaka.
Tsy hisy fiantraikany amin’ ny filaharana intsony ny andro faha-38 farany amin’ny Liga. Hijanona eo amin’ny laharahana faharoa kosa ny Barcelone. Natsimbadiky ny Real Madrid tanteraka ny rasa tamin’ity fifaninanana Liga ity, na dia tara isa roa taorian’ny Barcelone aza izy ireo, talohan’ny fiatoan’ny fifaninanana tany Espana. Fandresena hatrany no azon-dry Sergio Ramos, vodilaharana sady kapitenin’ny Real de Madrid, tamin’ireo lalao folo nataony, taorian’ny fiverenan’ny Liga. Isan’ireo mpilalao angady nananana sy vy nahitana an’izao fahombiazan’ny Real Madrid izao ilay mpanafika frantsay, Karim Benzema.
Mbola hiatrika ny lalao miverina amin’ny ampahavalondalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Eoropa isan-tarika ny “Trano fotsy”, izay hihaonany amin’ny Manchester City sy hanonerany ny fahareseny 1 noho 2 tao an-taniny, nanoloana an’ity klioba Anglisy ity.
L’article Kitra espaniola :: Voahosotra ho tompondakan’ny Liga ny Real Madrid est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 18/07/2020
Espagne - Kitra - Real Madrid
Nations League – Deschamps nanasazy ireo Bleus taorian’ny faharesena tany Pays-Bas
EQUIPE DE FRANCE – ny mpanazatra an’ireo champions du monde dia tsy nankasitraka tokoa ny endri-dalao nasehony tany Pays-Bas, ary nataony nazava tsara tamin’ireo mpilalaony izany. Tsy mendrika ny ekipa iray tompon-daka eran-tany vao volana vitsivitsy, ny faharesena mahamenatr’ireo Bleus tany Rotterdam, ny zoma farany teo (0-2), dia nahasarotra ny mety handraisan’ny frantsay anjara amin’ny manasa-dalana amin’ny Ligue des Nations (ny Pays-Bas dia match nul monja no ilainy, amin’ny alatsinainy izao any Allemagne, mba ahafahany tafavoaka ka hanitsana ny Frantsay.) Nahatezitra ireo staff frantsay koa izany, voalohany amin’izay i Didier Deschamps. Raha niheritreritra ny hanome hariva malalaka ho an’ireo mpilalao izy ny asabotsy teo, dia niova hevitra izy tamin’ny farany, ka nanapa-kevitra ny tsy hamela an’izy ireo hivoaka. Ny gazety L’Equipe dia manambara fa ny Staff frantsay dia nanery ireo mpilalao hijanona ao Clairefontaine, nanova ny fotoana tokony nanaovana ny décrassage tokony natao zoma hariva izany. Porofo izany fa tsy hakana aina sy hilalaovana izao, ny fanazaran-tena ny alahady dia tsy azo hatrehan’ny olona ivelan’ny groupe.
Voka-dalao 21 Nov 2018 – Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets
Timberwolves / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Gibson 19 3/3 0/0 1/1 0 4 4 1 2 0 0 0 7 12 R. Covington 37 6/12 4/9 0/1 0 4 4 0 1 2 1 0 16 14 A. Wiggins 30 6/15 1/5 0/0 1 4 5 2 3 0 3 0 13 8 K. Towns 28 7/14 1/5 7/9 1 6 7 2 4 0 6 0 22 16 J. Teague 29 2/5 0/1 3/4 0 2 2 8 2 2 3 0 7 12 D. Saric 28 4/9 1/4 3/3 3 4 7 3 1 1 0 0 12 18 A. Tolliver 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Dieng 20 0/4 0/0 0/0 1 6 7 4 2 1 2 3 0 9 T. Jones 19 1/6 0/2 2/2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 -1 D. Rose 29 6/11 2/6 6/6 2 2 4 4 0 1 1 0 20 23 Total 35/79 9/32 22/26 8 32 40 24 15 8 17 3 101 Nuggets / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Millsap 28 11/13 2/2 1/2 1 4 5 0 4 5 1 1 25 32 J. Hernangomez 32 3/11 2/7 0/0 3 3 6 2 0 0 2 0 8 6 N. Jokic 37 3/13 1/5 0/0 2 10 12 10 4 1 3 0 7 17 J. Murray 39 6/15 4/8 2/2 1 2 3 4 4 1 2 2 18 17 G. Harris 36 7/16 1/8 2/2 1 3 4 2 2 2 1 0 17 15 T. Lyles 14 2/7 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 -2 M. Plumlee 18 2/3 0/0 0/0 1 3 4 7 3 3 1 1 4 17 M. Morris 23 4/6 1/1 0/0 0 3 3 4 1 0 1 0 9 13 M. Beasley 14 4/5 3/3 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 11 12 Total 42/89 14/35 5/6 9 31 40 29 22 12 13 4 103
Kitra – Tompondakan’i Afrika: voatazon’ny FC Platinum 1 sy 1 ny Cnaps Sport
Ratsy ny vokatra ho an’ny Cnaps Sport, teo amin’ny lalao mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”. Fihaonana, notanterahina teny Vontovorona, omaly alarobia. Voatazon’ny FC Platinum Zimbaboe, tamin’ny isa 1 no ho 1, mantsy ity ekipa tompondakan’i Madagasikara ity. Tamin’ny ankapobeny, nofehezin’ny Cnaps Sport ny fihaonana. Nanantombo teo amin’ny fanafihana izy ireo, saingy lesoka ny famonoam-baolina. Na izany aza, nisy ihany ny baolina matin’ny Malagasy teo amin’ny fidirana voalohany, saingy nolavin’ny mpitsara fa voalaza ho “hors jeu”. 0 no ho 0 ny nentin’ny roa tonta niala sasatra. Mbola nitohy kosa ny fanafihan’ny Cnaps Sport, teo amin’ny 45 mn faharoa. Nahitam-bokany izany, taorian’ny fitapitaka nataon’i Lalaina, tamin’ireo vodilaharana zimbaboeanina izay voatery namingana azy tao anaty faritra tsy azo ivalozana, teo amin’ny minitra faha-62. Nahazo “penalty” ny Malagasy taorian’izay. Tafiditr’i Ando soa aman-tsara ny dakany, nahavery tanteraka an’i Peterson, mpiandry tsatoby zimbaboeanina. Niserana ihany ny hafalian’ny Cnaps satria nosahalain’ny FC Platinum izany teo amin’ny minitra faha-67, taorian’ny rindran-damina nataon’i Elvis ary nanolotra an’i Madhanaga, namono ny baolina. Ho sarotra ny lalao miverina ho an’ny Cnaps Sport, hatao ao amin’ny kianja Mandava Stadium, afaka herinandro. Tompondaka L’article Kitra – Tompondakan’i Afrika: voatazon’ny FC Platinum 1 sy 1 ny Cnaps Sport a été récupéré chez Newsmada.
FIBATANA FONJAMBY – LALAO OLYMPIKA :: Manakaiky an’i Tokyo i Rosina sy Eric Herman
Tafita tamin’ny zana-tohatra voalohany teo amin’ny fifanintsanana hiatrehana ny Lalao Olympika, hatao any Tokyo amin’ny 2020, i Rosina Randafison sy Eric Herman Andriantsitohaina, tany Le Caire, Ejypta. Miankina amin’ny dingana faharoa ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Federasiona iraisam-pirenena na ny “Sylver qualifiers”, ho-tanterahina any Thaïlande, amin’ny volana febroary ho avy izao, ny mety hiatrehana na tsia an’ity Lalao Olympika hatao any Tokyo ity. Mila tafakatra eo amin’ny lampihazo fotsiny izy ireo, amin’io fifaninanana ho avy io, dia efa azo antoka ny Lalao Olympika. Teo amin’ny sokajy latsaky ny 45 kg dia azon’i Rosina avokoa ireo medaly volamena telo. Nahatafakatra fonjamby 60 kg teo amin’ny “arraché” sy 80 kg teo amin’ny “épaulé jeté” izy ary mbola nitana ny laharana voalohany ihany koa teo amin’ny “total olympique” (140 kg). Laharana fahatelo kosa no nisy an’i Eric Herman, tamin’ny fiafaran’ny fifaninanana savaranonando. Medaly volafotsy roa sy alimo tokana no azony teo amin’ny sokajy latsaky ny 55 kg. Nahabata vesatra 95 kg izy teo amin’ny “arraché”, ka nipetraka teo amin’ny laharana fahafito. Faharoa kosa no nisy azy reo amin’ny “épaulé jeté” (136 kg) sy “total olympique” (231 kg). L’article FIBATANA FONJAMBY – LALAO OLYMPIKA :: Manakaiky an’i Tokyo i Rosina sy Eric Herman est apparu en premier sur AoRaha.
JIOI – Ministera: niantohana ny fampivondronana
Niantohan’ny minisiteran’ny Tanora (MJS) tanteraka ny tapany voalohany. Nifarana, omaly, ny andiany voalohany amin’ny fampivondronana ireo atleta miisa 228, niaraka tamin’ny mpanazatra 46 , hiatrika ny lalaon’ny Nosy “JIOI”. Nisy ny lanonana namaranana izany teny Bypass, nanaovana ny tatitra sy ny jery todika nandritra ny 30 andro. Niantoka tanteraka ny lany rehetra tamin’izany ary mbola miezaka mitady hatrany ny hanatsarana ny fanomanana ho an’ireo atleta ny minisitera. “Mety nisy ny lesoka, saingy hatsaraina izany amin’ny tapany faharoa“, hoy izy ireo. Manan-danja voalohany ny atleta satria hifaninanana izy ireo. Nampiavaka ny tapany voalohany ny fiarahana mipetraka tamin’ny hotely lehibe, i Madagascar Espace Bypass sy ny M Hotel Ampefiloha ary mbola ho torak’izany ihany koa ny amin’ny tapany faharoa. Najanona ny fampivondronana amin’izao andro fety izao na tsy mbola tokony hifarana aza izany, raha ny fanazavana. Tsy mbola nanomboka kosa ny fampivondronana ho an’ny taranja miisa efatra, ahitana ny judo, ny voile, ny baolina kitra ary ny lomano noho ny antony teknika, raha ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny MJS. Efa eo am-pijerena akaiky ny fanatsarana sy fanamboarana fotodrafitrasa ho an’ny taranja maromaro, ny MJS, ho an’ny fanoman-tena hatrany. Anisany hisitraka izany, ny tenisy ambony latabatra, ny lomano, ny atletisma, ny fibatana fonjamby ary ny badminton. Nisaotra ny MJS ireo atleta sy ny solontenan’ny federasiona ary nangataka ny hanohizana izao ezaka izao hahazoana vokatra tsara.Mi RazL’article JIOI – Ministera: niantohana ny fampivondronana a été récupéré chez Newsmada.
Ligue des Champions – Voka-dalao 28 novembre 2018 PSV vs Barcelone
Foot - People
Foot – WTF – Lionel Messi sy i Paul Pogba nifanena tany Dubaï tao amin’i Salt Bae
Tsy voaantso tamin’ireo ekipa nasionaly izy roalahy satria samy naratra, Lionel Messi sy i Paul Pogba dia nifanena tany Dubaï tamin’y zoma hariva teo, tao amin’ny restaurant-n’ilay mpahandro malaza Salt Bae. Rehefa tsy nandray anjara tamin’ny fampivondronana ireo mpilalao amin’ny ekipa-pirenena tamin’ity novambra ity Lionel Messi sy i Paul Pogba dia nifanena tany Dubaï tamin’y zoma hariva teo tao amin’ny restaurant-n’ilay mpahandro malaza Salt Bae. Afaka mba nifampiresaka izy roalahy, ary afaka nanatrika ny fomba fanapahana hena malaza fanaon’ity mpahandro turc ity, sy ny fomba fandrarahany sira.
Tsy niandry ela fa iray andro monja taorian’ny fahavitan’ny antsapaka nahalalana ireo ekipa iray vondrona, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, hatao any Egypta, izany hoe : ny asabotsy lasa teo, nijery avy hatrany ny kianja hilalaovany ao Alexandrie ireo tomponandraikitra sy ny teknisianina, avy amin’ny ekipan’i Ginea Konakry sy ny Nizerianina, iray vondrona amin’ny Barea de Madagascar.Nidina nijery ifotony mihitsy izy ireo ny amin’ny toetoetry ny bozaka hilalaovana sy ny firafitry ny toerana ary ny pitsopitsony rehetra. Midika izany fa mailo tanteraka izy ireo ka mitandrina mafy, amin’ity fifanintsanana isam-bondrona ity.Raha tsiahivina, kianja anisan’ny zokiny indrindra ao Egypta ny Stade d’Alexandrie. Natsangana ny taona 1929 izany fotodrafitrasa izany, ary efa nandray ny lalao fifanintsanana, tamin’ny “Can”, notanterahina tany an-toerana, ny taona 2006.Ny taona 2009 vao nasiam-panamboarana izany kianja ao Alexandrie izany, mahazaka mpijery mihoatra ny 80.000. Bozaka natoraly no hilalaovana ao fa tsy “synthétique” akory. Kianja hilalaovan’ny Ittihad Alexandrie sy ny Al Olympi ary ny Smouha Sporting Club. TompondakaL’article «Can 2019»: nijery ny kianjan’i Alexandrie ny Gineanina sy ny Nizerianina a été récupéré chez Newsmada.
Antsohihy : Le nouveau local de la direction régionale des mines attaqué
Le local attaqué par les bandits. Un nouveau local de la direction régionale des mines a été attaqué jeudi soir vers 22 heures par huit hommes armés non identifiés, à Antsohihy. Un agent de sécurité a été blessé par les malfrats. Les cambrioleurs ont mis en désordre les locaux et ont occasionné d’importants dégâts matériels. Un tas de débris de vitres et des morceaux du bureau de poste ont jonché le sol. Alertés des faits, le fokonolona de la localité a été réveillé et s’est rendu sur les lieux. Le civil blessé a pu être sauvé. Voyant le fokonolona arrivé, les voleurs sont ressortis après quelques secondes pour prendre la fuite. Les bandits n’ont cependant rien dérobé. C’est la toute première attaque de ce genre contre un bureau de l’État dans la région. Après cette intrusion, une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour mettre la lumière sur cette affaire. En effet, d’après le constat sur les lieux, les voleurs ont eu l’intention de voler les fenêtres et les portes vitrées du bureau, récemment construit. Inquiets, les agents de l’État sont alarmés face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone. Yv Sam L’article Antsohihy : Le nouveau local de la direction régionale des mines attaqué a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Natao hiaro ny zon’olombelona nefa tsy manaja ny lalàna. Hangataka eny amin’ny fitsarana mahefa ireo fiarahamonim-pirenena miahy ny zon’olombelona miisa 40 ny fampitsaharana ny fananganana ny birao vaovaon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon’olombelona (CNIDH). Nambaran’izy ireo fa efa voafidy ny mpikambana mandrafitra ny birao vaovaon’ny CNIDH nefa mbola misy olona roa lany tamin’ny fifidianana nataon’ny fiarahamonim-pirenena miahy ny zon’olombelona tsy mbola namoahana didy manendry azy ireo. 11 no mandrafitra ny CNIDH. Dimy amin’ireo avy amin’ny fiarahamonim-pirenena. Ny volana novambra 2020 no nanaovana ny fifidianana ireo olona dimy ireo ary teo ambany fiahian’ny ministeran’ny fitsarana. “Dimy izahay no lany tamin’ny fifidianana tamin’ny 27 novambra 2020. Ny roa nalatsaka tsy nomena décret de nomination”, hoy Andrianady Bakoly, commissaire anisany tsy nahazo « décret de nomination ». Nambaran’ireto fiarahamonim-pirenena ireto fa rafitra natao hiaro ny zon’olombelona ny CNIDH kanefa tsy manaja lalàna. « Tsy ho tanteraka mihitsy izany fampanajana ny zon’olombelona kanefa ny lalàna aza tsy hajaina », hoy hatrany i Andrianady Bakoly. Manao antso avo izy ireo ny hamoahana ny didy manendry ireo olona roa lany tamin’ny fifidianana. “Ho atao toy tsy misy io birao vaovao io. Manao serment dia averina ny fifidianana ny birao vaovao”, Raparison Eric,mpandrindra ny Sehatra Iombonan’ny Fananantany (SIF) mivondrona ao amin’ny Rohy. “Mitodika amin’ny Filohan’ny Repobika izahay mba hanaramaso tsara fa tsy hanasonia izay mety ho fitaky ny olona. Raha mamaky ny lalàna dia tokony tsy hisaratsaraka ny fanendrena ireo olona ao anatin’ ireo rafitra”, hoy izy. Nohamafisin’ny solontenan’ny fikambanana Action sociale pour Développer (ASD), Ravalitera Jacques Michael fa « tsy hipetra-potsiny amin’ity raharaha ity. Mila manaja lalàna”. Ra-Nirina Cet article FIARAHAMONIM-PIRENENA 40: Mangataka ny fampitsaharana ny fananganana ny birao vaovao ny CNIDH est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FIARAHAMONIM-PIRENENA 40: Mangataka ny fampitsaharana ny fananganana ny birao vaovao ny CNIDH a été récupéré chez Délire Madagascar.
Raharaha… saro-pady Nampitandrina ny eo anivon’ny Foloalindahy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rokotonirina Léon Richard, manoloana ny fisian’ny teti-dratsin’ny sasany hifofo ny ain’ny tomponandraiki-panjakana ambony sy ny filohan’ny Repobika. Tsy handeferana ny fanaovana heritsera, fa misy lalàna velona ny amin’ny fanaovana asa fanakorontanana sy famadihan-tanindrazana.Mitohy ny fakana am-bavany izay mety ho voasaringotra na hanome fanampim-baovao ny amin’izay fanonganam-panjakana izay. Anisan’izany, ohatra, ny arsevekan’Antananarivo eo anivon’ny Ekar, ny Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène, izay nohenoina nandritra ny ora efatra. Tsy nisy nipika ny resaka, nefa fantatra ihany fa voateniteny ny amin’ny voarohirohy misandoka ho mpanolotsainy.Amin’izany, nisy ny fihaonan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Ekar, notarihin’ny kardinaly Tsarahaza Désire, tamin’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Voaresaka tamin’izany ny tsy fanaovan’ny fiangonana politika sy ny tsy fankasitrahany heritsera. Teo koa ny fitadiavam-bahaolana amin’ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny fanamboaran-dalana…Mandra-pitrangan’izay hitranga ny amin’ny tohin’ny famotorana sy ny ho fandehan’ny fitsarana ny raharaha, ranolava ny famoahana fanambarana: manameloka ny herisetra, tsy mankasitra fanonganam-panjakana… Eo koa ny fanazavan’ny mpahay lalàna sasany fa tokony hohajaina ny fanadihadiana, ka tsy hamoaka vaovao aloha izay tsy tomponandraikitra amin’ny famotorana.Amin’izany rehetra izany, mila fitoniana sy filaminana ny raharaha: ndrao maika tsy faingana hahalala zavatra mialoha? Saro-pady ny raharaha.R.Nd. L’article Jery taratra… herinandro a été récupéré chez Newsmada.
Fampisehoana momba ny sakafo: ezahina hampitomboina ny vokatra biolojika
Nanomboka, omaly eny Antaninarenina hatramin’ny 31 jolay 2021, ny varotra fampisehoana momba ny sakafo vita amin’ny vokatra malagasy. Asongadina amin’izany ny vokatra biolojika, nomen-dRtoa Rakotoniaina Marinà, talen’ny fanohanana ny agribusiness, fanazavana bebe kokoa. Taorian’ny hetsika momba ny asa tanana, iray volana lasa izay, homena toerana koa ny vokatra sakafo, hanohanana ny tantsaha malagasy mpamokatra sy hampiroboroboana ny fandraharahana avy amin’ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana. Mikarakara izao hetsika kanton’i Gasikara izao ny Chez Elle, iarahana amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono, sy ny tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika. Hita amin’ity fampisehoana ity ny sakafo vita amin’ny akora fototra avy eto an-toerana. Tanjona ny hanandratana ny vita malagasy.Asongadina ny vokatra biolojika, mbola vitsy mpahafantatra eto amintsika, ary mbola vitsy koa, manodidina 70 000, ny mpamboly vokatra biolojika, manana fanamarinana ara-dalàna. Anisan’ny vokatra biolojika mampalaza an’i Madagasikara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila, ny kakao, ny makamba, mahatonga ireo vokatra ireo ho ambony ny tinady any amin’ny tsena iraisam-pirenena.“Eo am-pamolavolana paikady izao hampitomboana ny vokatra biolojika eto Madagasikara, tsy amin’ny zezika ihany, fa eo koa ny masomboly. Mpiara-miombona antoka amintsika ny FAO amin’ny fanamboarana bokin’andraikitra, anisan’ny mpamatsy vola ny Banky iraisam-pirenena sy ny Vondrona eoropeanina”, hoy Rakotoniaina Marinà. Na izany aza, tsy misy akora simika amin’ny ankapobeny ny vokatry ny tantsaha malagasy.Tohanana ireo mpamokatraEzahina tohanana ireo mpamokatra, hanaraka ireo fenitra napetraka, toy ny fanajana ny fotoam-piotazana, ny fitaovana fampiasa. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa miankina indrindra amin’ny toetr’andro sy ny tontolo iainana, efa hita ny fiantraikany amin’ny tsy fahampian’ny rotsak’orana.Manomana amin’ny fandraisana anjara ny fivoriana an-tampony momba ny sakafo ataon’ny Firenena mikambana (ONU) i Madagasikara, amin’ny septambra 2021. “Ampy ny sakafo eto ambonin’ny tany ho an’ny mponina 7,8 miliara”, hoy ny ONU, saingy 820 tapitrisa ny misedra ny tsy fahampian-tsakafo, 144 tapitrisa ny zaza latsaky ny dimy taona. Ahitana taratra izany eto Madagasikara, indrindra ny any atsimo. R.MathieuL’article Fampisehoana momba ny sakafo: ezahina hampitomboina ny vokatra biolojika a été récupéré chez Newsmada.
Orinasa Manjary: manodina vokatra mampitombo ny hery fiarovana
Manjary, orinasa madinika niforona tamin’ny 2019, manodina voankazo sy legioma miaraka amin’ny tantely. Eny Antanimena sy Ambatobe misy ny orinasa, manana tranombarotra eny Tsiazotafo, ary misy ireo tranombarotra lehibe maka ny vokatra ao aminy. “Tany am-boalohany, tetikasa fanamainana voankazo sy legioma, taty aoriana rehefa niditra ny Covid-19, niitatra ny hevitra nitady sakafo mampitombo ny hery fiarovana. Ny tompon’ny orinasa rahateo agronome”, hoy Rakotondratsima Joe, misahana ny varotra ao amin’ny Manjary, mandray anjara amin’ny fampisehoana momba ny sakafo malagasy eo Antaninarenina. Mampitombo ny tahan’ny hery fiarovana ny fikarohana, mifototra amin’ny tantely.Satria efa zatra nampiasa dite, sakamalaho sy tantely ny Malagasy, nohamafisina izany, ohatra, amin’ny tamotamo miaro ny vavony, ny aty, sy amin’ny homamiadana, toy izany koa ny ananambo na “moringa” hanentanana ny rehetra hanjifa io karazana anana io. “Feno otrikaina, fibre naturel sy proteine ny ananambo. Manodina ihany koa izahay baobab avy any atsimon’ny Nosy, ahazoana vovoka sy tantely izay feno otrikaina sy magnesium, nefa mbola vitsy mpahafantatra. Vokatra vaovao izao ny vovoka karazana legioma fanao lasopy”, hoy Rakotondratsima Joe.Manao ezaka ny tompon’andraikitra mampahafantatra ny orinasa Manjary, nanomboka ny taona 2020. Hita izao ny vokatra any amin’ireo tranombarotra lehibe, toy ny Jumbo Score, Tandramena, Shop Liantsoa ; misy any Antsirabe, Moramanga, Fianarantsoa. “Araka tsara ny tinady. Na izany aza, satria orinasa vao misandratra Manjary, mbola tsy tena manao famokarana lehibe izahay fa arakaraka ny tinady sy ny fihodin’ny varotra », hoy ihany Rakotondratsima Joe.Vokatra natoraly 100 % ny ahodin’ity orinasa ity, mety ho an’ny fahasalamana. Karazany maro ireo manodina vokatra malagasy hita tao Antaninarenina, nokarakarain’ny Chez Elle, nanomboka ny 28 jolay mifarana anio, ary filamatra amin’ny fihariana ho an’ny tanora. R.MathieuL’article Orinasa Manjary: manodina vokatra mampitombo ny hery fiarovana a été récupéré chez Newsmada.
Lalao Olympika-Atletisma: hiatrika ny fifaninanana, rahampitso, i Todisoa Franck
Solontena malagasy tokana mbola anatin’ny fifaninanana any Tokyo miatrika ny lalao Olympika Rabeharison Todisoa Franck. Handray anjara eo amin’ny hazakazaka 400 m ity atleta malagasy ity, rahampitso…Any amin’i Todisoa Franck, atleta tokana mbola tsy nahavita ny anjarany anatin’ny lalao Olympika tanterahina any Tokyo, ny fanantenan’ny mpankafia fanatanjahantena sy ny delegasiona malagasy tonga any an-toerana amin’izao fotoana. Hiatrika ny hazakazaka mirefy 400 metatra ity atleta misolotena ny Malagasy ity ary nilaza fa hanao izay ho afany sy hitondra avo ny voninahi-pirenena. “Hiady hatramin’ny farany sy hanao izay tratry ny heriko aho ho an’ny tanindrazana”, hoy i Todisoa Franck. Ankoatr’io, vinan’ity atleta ity mandritra izao lalao Olympika voalohany atrehiny izao ny hanatsara ny zava-bita tsara indrindra nataony teo amin’ny hazakazaka mirefy 400 m. Ity farany izay mitana ny “record” amin’io sehatra io ho an’ny eto Madagasikara hatreto. Taorian’ny nahararaka ny atleta mpibata fonjamby sy ireo mpilomano mianadahy, iny herinandro lasa iny, niaraha-nahalala ihany koa ny tsy nahatafakaran’ilay judokate malagasy rehefa lavon’ny teratany italianina tamin’ny alalan’ny “ippon”, ny talata lasa teo. Eo amin’ny taranja atletisma noho izany no fanantenana farany ho an’ny Malagasy mandritra ity lalao Olympika tontosaina any Japana ity. Tsiferana R.L’article Lalao Olympika-Atletisma: hiatrika ny fifaninanana, rahampitso, i Todisoa Franck a été récupéré chez Newsmada.
Basikety- “Young coach”: nivoaka ireo tanora nahavita fiofanana
Miisa 41 ireo mpanazatra “young coach” nahavita fiofanana nokarakairan’ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny basiket-ball sy ny CEBB, nanomboka ny 20 ka hatramin’ny 27 jolay teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha. Lehilahy avokoa ny 39 amin’izy ireo raha toa ka roa ny vehivavy nanatevin-daharana nanaraka ny fiofanana. Nisy vitsivitsy amin’izy ireo tsy tafavoaka ho isan’ireo mpanazatra nahavita fiofanana. Etsy ankilany, entina hanampiana ireo tanora hampitombo ny traikefa ananany sy hampandrosoana ny lentan’ny basikety malagasy io fanofanana io. Marihina fa fisantarana fotsiny ihany ity natao teto amin’ny ligin’Analamanga ity ary hisitrika izany koa ny ligim-paritany maro.Tsiferana R. L’article Basikety- “Young coach”: nivoaka ireo tanora nahavita fiofanana a été récupéré chez Newsmada.